“प्रेम बाँच्ने आधार हो ।” -सारिका के सी (मोडल /नायिका ) - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
प्रस्तुती ः रामेश्वर आचार्य सागर
० बिन्धबासिनी म्युजिक अवार्ड २०७४ अन्तरगत यहि पौष १५ गते भएको अवार्ड कार्यक्रममा पब्लिक च्वाइस द्यभकत अवार्ड पाउनुभयो, कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
खुसी लागिरहेको छ । आफुले गरेको कामको सहि मुल्याङ्कन गरे जस्तो लाग्यो । जिम्मेवारी र दायित्व बढेको छ । अवार्डको सम्मानको लागि मैले अझ धेरै राम्रो काम गर्नुपर्छ ।
मोडल बन्ने चाहना मेरो सानैदेखिको सपना हो । बागलुङको स्कुलबाट एस.एल.सी. परीक्षा दिएपछि आफ्नो सपना पुरा गर्न काठमाडौँ आएँ । आफ्नो रहर पुरा गर्न मोडलिङ क्षेत्रमा लागेको हँु । तर अहिले यो नै मेरो पेसा भएको छ ।
० म्युजिक भिडियोको अवसर कसरी पाउनुभयो ?
काठमाडौँ आएपछि चर्चित नृत्य निर्देशक शंकर बि.सी. को नृत्य प्रशिक्षण केन्द्र कमलादिमा डान्स सिकेँ । डान्स सिक्दा सिक्दै कस्तुप पन्त दाईले पहिलो म्युजिक भिडियोको अवसर मिलाइदिनुभयो । यसै क्रममा धेरै कलाकर्मीहरुसँग चिनाजान तथा सम्पर्क भयो । अहिलेसम्म मैले अभिनय गरेको म्युजिक भिडियोहरुको संख्या २०० बाट नाघिसकेको छ ।
० मोडलिङ क्षेत्रको नराम्रो पक्षहरु के के होलान ?
कला र प्रतिभाले भन्दा पैसाको भरमा मोडल बन्नेहरु धेरै छन् । यहाँ चिनेको र आफ्नो मान्छेलाई बढि प्राथमिकता दिइन्छ । केही मोडलहरुको गलत व्यवहारले गर्दा समाजले सबै मोडलहरुलाई एउटै नजरले हेर्ने गर्छन् ।
० हरेक मोडलहरुको चाहना चलचित्रको सफल नायिका बन्नु हो । तर तपाई चलचित्र छोडेर म्युजिक भिडियोहरुमा नै बढि केन्द्रित हुनुहुन्छ किन ?
मेरो पहिलो चलचित्र कान्छि मट्याङ ट्याङले राम्रै व्यापार ग¥यो । पुरन थापाले मलाई चलचित्रमा अवसर मिलाइदिनुभएको हो । मैले अभिनय गरेका अरु फिल्मले खासै राम्रो व्यापार गरेनन् । म्युजिक भिडियोको सुटिङको लागि १ या २ दिनको समयले पुग्छ तर चलचित्रको लागि महिनौ दिनसम्म घरबाट बाहिर बस्नुपर्ने हुनाले घर परिवार सहमति दिदैनन् । पारिवारीक समस्याका कारण मैले चलचित्रलाई निरन्तरता दिन नसकेको हो ।
० चलचित्रको तुलनामा म्युजिक भिडियोमा बढि पैसा पाउने भएर त होइन नि ?
त्यस्तो होइन । अहिले चलचित्रमा अभिनय गर्ने कलाकारहरुले पनि आकर्षक पारिश्रमीक पाउन थालेका छन् । आफ्नो अभिनय क्षमता तथा लोकप्रियतासँगै कलाकारहरुले आफ्नो पारिश्रमीकमा धेरै वृद्धि गरेका छन् । यसले नेपाली चलचित्र क्षेत्र पनि धेरै विकसित भइसकेको छ भन्ने बुझाउँछ ।
० मिडियामा तपाईको नाम मोडल विमल अधिकारीसँग जोडिएको गसिप चल्ने गर्छ । विकसित कुरा के हो ?
मैले अधिकांश म्युजिक भिडियो बिमल अधिकारीसँग गरेको हुनाले त्यस्तो हल्ला चलेको हो । म उहाँलाई दाई मान्छु र उहाँले नै मलाई म्युजिक भिडियोमा अघि बढ्न साथ र सहयोग गरिरहनु भएको छ सबै गसिपहरु कहाँ सत्य हुन्छन् र ?
० मर्ने मितिमा भन्ने गितमा कपाल खौरेको युवतीको भुमिकामा अभिनय गर्नुभएको छ । कस्तो अनुभव भयो ?
त्यो गितमा मैले साच्चिकै कपाल खौरेको होइन । मेकअप म्यानले मलाई त्यस्तो गेटअप बनाइदिनु भएको हो । पछि त्यो गितको म्युजिक भिडियो हेर्दा म साच्चिकै रोएको थिएँ ।
० धेरै गितको म्युजिक भिडियोमा तपाई रुनुभएको छ, के तपाई रुन्चे मोडल हो ?
मैले सुरुदेखि नै सेन्टिमेन्टल गितहरुमा अभिनय गरेँ । मलाई विशेष गरि त्यस्तै गितहरुको अफर आउँछ । तर मैले आधुनिक तथा रोमान्टिक गितहरुमा पनि अभिनय गरेको छु । रुन्चे मोडल नै चाँहि होइन ।
० तपाईले दुवै हातमा ट्याटु खोपाउनुभएको रहेछ । विशेष कसैको लागि हो कि ?
ट्याटु खोपाउन मन थियो तर समय मिलेको थिएन । सुटिङको लागि सौरहा जादा समय मिल्यो । मैले एउटा हातमा ब्धिबथक दभ जबउउथ खोपाएको छु । यो ट्याटु मात्र मेरो लागि हो ।
फुर्सद भयो भने फिल्म हेर्छु र साथिहरुसँग घुम्न जान्छु ।
० तपाईलाई कुन ठाउँ घुम्न मन पर्छ ?
मलाई काठमाडौँ र पोखरा मन पर्छ । मुस्ताङ पुगेकी छैन । समयले साथ दियो भने एकपटक मुस्ताङ पुग्ने सपना छ ।
० टेलिभिजन कत्तिको हेर्नुहुन्छ ?
टेलिभिजनमा विशेषगरि नयाँ नयाँ म्युजिक भिडियो, टिभि फिल्मी तथा कमेडी शोहरु हेर्छु ।
० कस्ता ड्रेसअप मन पर्छ ?
विशेषत म टि–शर्ट पाइन्टमा हुन्छु ।
० आफुलाई कत्तिको राम्री छु जस्तो लाग्छ ?
ठिकै छु जस्तो लाग्छ । साथिहरु तिम्रो आँखा राम्रो छ भन्छन् । कोही कोही भने अनुहारको कोठी तिमीलाई निकै सुहाउँछ भन्छन् ।
० कुन सवारी साधन प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
एक्लै हुदाँ स्कुटी र साथिहरुसँग हुदा ट्याक्सी प्रयोग गर्छु ।
० अहिलेसम्म आफ्नै पैसाले किनेको महङगो वस्तु कुन हो ?
स्कुटी नै हो ।
० आफ्नो कमाइबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सन्तुष्ट नै छु । कमाएको पैसा घर परिवारलाई दिनुपरेको छैन । आफुलाई खर्च गर्न पुग्छ ।
० तपाईको बढि खर्च के मा हुन्छ ?
हामी महिलाहरुको खर्च उहि त हो सपिङ । लुगा कपडा र कस्मेटिक सामानमै बढि खर्च हुन्छ ।
० तपाईको जिवनको सबैभन्दा बढि सुखद क्षण कुन हो ?
पहिलो म्युजिक भिडियो टेलिभिजनमा आउँदा । अञ्जु पन्तको गितलाई दिपक विक्रम शाहीले निर्देशन गर्नुभएको थियो ।
० दुखद क्षण ?
म कक्षा २ मा पढ्दा बाबा बित्नुभयो । मैले बुझेदेखि नै मेरो जिवनमा बाबाको मायाको अभाव खट्कीरह्यो ।
० कार्यक्रमको सिलसिलामा विदेश जानुभएको छ ?
थाइल्याण्ड गएको छु ।
० तपाईको कमजोरी के हो ?
म आफ्नै कुरामा बढि केन्द्रित हुन्छु । अरुको कुरामा खासै वास्ता गर्दिन । यो मेरो कमजोरी नै हो ।
प्रेम बाच्ने आधार हो । यसले मानिसलाई परिपक्व बनाउँछ ।
० तपाईले कसैलाई प्रेम गर्नुभएको छ ?
पहिला कसैलाई मन पराएको थिएँ तर अहिले म प्रेम सम्बन्धमा छैन ।
० सेक्स के हो ?
यो प्राकृतिक चिज हो तर उमेर नपुगी शारिरीक सम्बन्ध राख्नु गलत हो ।
आवश्यक छ । यो नभइकन त वंश नै चल्दैन नि ।
० आफ्नो भावि श्रीमान कस्तो भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
मायालु, समझदार, शिक्षित, आकर्षक व्यक्तित्व भएको तथा मेरो कामलाई साथ र सहयोग गर्ने होस जस्तो लाग्छ ।
० प्रेम विवाह गर्ने जोडीहरुको अधिकांश डिभोर्स भएको पाइन्छ, किन होला ?
प्रेम गर्दाको क्षण र वास्तविक जिवनको व्यवहार एकैनासको हुदैन र यो सम्भव पनि हुदैन । प्रेम गर्दा एक अर्काको कमी कमजोरी पहिल्यै थाहा भइसकेको हुन्छ ।